२० जेठ, काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्न लगाइएको निषेधाज्ञाको प्रभाव सकारात्मक परेको देखिएको छ ।
निषेधाज्ञा लागू भएको अघिल्लो दिन अर्थात् वैशाख १५ गते काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं , ललितपुर र भक्तपुरमा दुई हजार ४७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
जेठ १९ गते बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौंमा ९६९, भक्तपुरमा १८१ र ललितपुरमा ३०६ जना गरी एक हजार ४५६ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । अहिले दैनिक थपिने नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या निषेधाज्ञा लागू हुनुभन्दा एक साता अघिको अवस्थामा आएको छ । यसैगरी वैशाख अन्तिमतिर काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै साढे ४२ हजार सक्रिय सङ्क्रमित थिए ।
बुधबार सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या उपत्यकामा २४ हजार ६४६ मा झरेको छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाले उपत्यकासहित देशभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको बताए । उनले निषेधाज्ञा जारी भएको एक महिनापछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्न थालेको भए पनि कोरोनाको जोखिम कम भयो भन्न नमिल्ने बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
प्रदेश १ मा पनि सुरू भयो कोरोनाविरूद्धको खोप अभियान
आइपिएल अक्सन : नेपालबाट सन्दीप लामिछाने छानिए, न्युनतम मूल्य ४० लाख भारू !
पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोनाबाट थप ६ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या १२६
प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत थप १० जनामा कोरोना पुष्टि
विश्वभर ३ अर्ब २५ करोड ८४ लाख ५९४ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइयो